Focus (2015) | MM Movie Store
Death shotနဲ့ Harley Quinnကွီးပါတဲ့၂၀၁၅တုနျးကထှကျတဲ့အရမျးကောငျးတဲ့Focusဆိုတဲ့ကားလေးပါ????????????ဒါကတော့ IMD RATING 6.6ရထားတဲ့ Will Smithရဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးတခုပါ
Nickyဟာ Jessဆိုတဲ့မိနျးကလေးရဲ့ခြိနျးခွောကျငှညှေဈဖို့ကွိုးပမျးတာကိုခံရပါတယျဒါပမေယျ့ Jessမသိတာက Nickyဟာ ဝါရငျ့ကြှမျးကငျြသူ သူခိုးဖွဈနတေယျဆိုတာပါပဲNickyရဲ့ ပညာပေးမှုကိုခံရပွီး Jessဟာ Nickyတို့ရဲ့အဖှဲ့ထဲဝငျကာ သူခိုးတို့တတျအပျတဲ့ပညာကိုသငျကွားပါတော့တယျ
နောကျပိုငျးNickyနဲ့ခဈြသူတှပေါဖွဈခဲ့ပါတယျပိုကျဆံတှအေမြားကွီးရတဲ့အလုပျကွီးတခု ပွီးခြိနျမှာNickyက Jessကိုပိုကျဆံတှပေေးပွီး ရုတျတရကျထားခဲ့ပါတယျဒါပမေယျ့ Nickyသတိမထားမိလိုကျတာက Jessကို Nickyတကယျခဈြမိသှားတာပါပဲ
နောကျငါးနှဈအကွာမှာ ပွိုငျကားသူဌေးတယောကျဆီက နညျးပညာကို ခိုးယူဖို့Nickyအစီအစဉျတှခေပြွီး ကွိုးစားနခြေိနျမှာ မမြှျောလငျ့ပဲJessဟာ ပွိုငျကားသူဌေးနဲ့တှဲနတောကို Nickyတှလေို့ကျရတော့….အခဈြဟောငျးကိုပွနျပေါငျးဖို့ကွိုးစားမလားအခဈြဟောငျးကိုဂရုမစိုကျဘဲ ပွိုငျကားသူဌေးဆီကနညျးပညာပဲခိုးမလားဆိုတာကိုတော့….
Death shotနဲ့ Harley Quinnကြီးပါတဲ့၂၀၁၅တုန်းကထွက်တဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့Focusဆိုတဲ့ကားလေးပါ????????????ဒါကတော့ IMD RATING 6.6ရထားတဲ့ Will Smithရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတခုပါ
Nickyဟာ Jessဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ချိန်းခြောက်ငွေညှစ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာကိုခံရပါတယ်ဒါပေမယ့် Jessမသိတာက Nickyဟာ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်သူ သူခိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲNickyရဲ့ ပညာပေးမှုကိုခံရပြီး Jessဟာ Nickyတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲဝင်ကာ သူခိုးတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာကိုသင်ကြားပါတော့တယ်
နောက်ပိုင်းNickyနဲ့ချစ်သူတွေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်ကြီးတခု ပြီးချိန်မှာNickyက Jessကိုပိုက်ဆံတွေပေးပြီး ရုတ်တရက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့် Nickyသတိမထားမိလိုက်တာက Jessကို Nickyတကယ်ချစ်မိသွားတာပါပဲ
နောက်ငါးနှစ်အကြာမှာ ပြိုင်ကားသူဌေးတယောက်ဆီက နည်းပညာကို ခိုးယူဖို့Nickyအစီအစဉ်တွေချပြီး ကြိုးစားနေချိန်မှာ မမျှော်လင့်ပဲJessဟာ ပြိုင်ကားသူဌေးနဲ့တွဲနေတာကို Nickyတွေ့လိုက်ရတော့….အချစ်ဟောင်းကိုပြန်ပေါင်းဖို့ကြိုးစားမလားအချစ်ဟောင်းကိုဂရုမစိုက်ဘဲ ပြိုင်ကားသူဌေးဆီကနည်းပညာပဲခိုးမလားဆိုတာကိုတော့….